Iindaba - INorthvolt, inkampani yaseYurophu yokuqala yebhetri ye-lithium, ifumana inkxaso yemali mboleko yebhanki yase-US $ 350 yezigidi
INorthvolt, inkampani yaseYurophu yokuqala yebhetri ye-lithium, ifumana inkxaso yemali mboleko yebhanki yase US $ 350 yezigidi
Ngokwengxelo zosasazo zakwamanye amazwe, i-European Investment Bank kunye nomthengisi webhetri yaseSweden Northvolt batyikitya isivumelwano semali mboleko yase-US $ 350 yezigidi ukunika inkxaso kumzi-mveliso wokuqala webhetri ye-lithium-ion kwi-Europe.
Imifanekiso evela eNorthvolt
Nge-30 kaJulayi, ixesha laseBeijing, ngokweengxelo zosasazo zangaphandle, i-European Investment Bank kunye nomakhi webhetri yaseSweden Northvolt batyikitya isivumelwano semali mboleko eyi- $ 350 yezigidi ukubonelela ngenkxaso kumzi-mveliso wokuqala webhetri ye-lithium-ion ibhetri eYurophu.
Imali iya kubonelelwa yiNgxowa-mali yeYurophu yokuTyala imali, eyintsika yesicwangciso sokutyala imali yaseYurophu. Ngo-2018, i-European Investment Bank yaphinda yaxhasa ukusekwa komatshini wokubonisa ii-Labour Northvolt Labs, eyabekwa kwimveliso ekupheleni kuka-2019, yaza yavula indlela eya kumzi mveliso wokuqala wase-Europe.
Umzi mveliso omtsha wegigabit yaseNorthvolt okwangoku usakhiwa eSkellefteé kumantla eSweden, indawo ebalulekileyo yokuhlanganisela izinto ezingafunekiyo kunye nezimbiwa, inembali ende yokwenza ubugcisa kunye nokurisayikilisha. Ukongeza, le ngingqi inesiseko samandla acocekileyo. Ukwakha isityalo kumantla eSweden kuya kunceda iNorthvolt isebenzise amandla ahlaziyiweyo ali-100% kwinkqubo yayo yokuvelisa.
U-Andrew McDowell, usekela mongameli we-European Investment Bank, wathi ukusungulwa kwe-European Battery Union ngonyaka ka-2018, le bhanki yonyuse inkxaso yayo kumnatha wexabiso leebhetri ukukhuthaza ukuseka kwenkululeko yokuzimela eYurophu.
Itekhnoloji yebhetri yamandla sisitshixo sokugcina ukhuphiswano lwaseYurophu kunye nekamva lekhabhoni. Inkxaso-mali yaseYurophu yokuxhasa ngemali iNorthvolt ibaluleke kakhulu. Olu tyalo-mali lubonisa ukuba ukukhuthala kweebhanki ngenkuthalo kwicandelo lezemali nezobuchwephesha kunokunceda abatyali mali babucala ukuba bajoyine iiprojekthi zentengiso.
UMaroš Efiovich, uSekela Mongameli we-EU ophethe i-European Battery Union, uthe: I-European Investment Bank kunye neKhomishini yaseYurophu ngamahlakani anobuchule kwi-EU Battery Union. Basebenza ngokusondeleyo kunye nomzi mveliso webhetri kunye namazwe angamalungu ukwenza iYurophu ihambe kule ndawo inobuchule. Fumana ubunkokeli behlabathi.
INorthvolt yenye yeenkampani eziphambili eYurophu. Inkampani yenza izicwangciso zokwakha ibhetri yeLithium-ion yasebumelin kwindawo encinci yokukhupha umoya. Ngokuxhasa le projekthi yesizwe yobugcisa, i-EU ikwazile ukuseka eyayo injongo yokuphucula ukuzimela kweYurophu kunye nokuzimela kwezicwangciso kumashishini aphambili kunye netekhnoloji.
INorthvolt Ett iza kusebenza njengesiseko esikhulu semveliso yaseNorthvolt, enoxanduva lokulungisa izixhobo ezisebenzayo, ibhetri yokuhlanganisa, ukuphinda isebenze kunye nezinye izinto ezincedisayo. Emva kokusebenza ngokugcweleyo, i-Northvolt Ett iya kuqala ivelise i-16 GWh yomthamo webhetri ngonyaka, kwaye iya kwanda ukuya kuthi ga kwi-40 GWh kwinqanaba elizayo. Iibhetri zaseNorthvolt zenzelwe iimoto, ugcino lwegridi, usetyenziso lwezezimboni kunye nezithwayo.
U-Peter Karlsson, umseki ongumseki kunye ne-CEO yase Northvolt, uthe: "I-European Investment Bank idlale indima ebalulekileyo ekwenzeni le projekthi kwasekuqaleni. INorthvolt inombulelo ngenkxaso yebhanki kunye neManyano yaseYurophu. I-Europe idinga ukuzakhela isixhobo esikhulu sokwenza ibhetri, iBhanki yoTyalo-mali yaseYurophu ibeke isiseko esiluqilima sale nkqubo. "